Gateway to the World dia manome traikefa an'ny karnavaly Trinidad kilasy voalohany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Trinidad sy Tobago » Gateway to the World dia manome traikefa an'ny karnavaly Trinidad kilasy voalohany
Ny "Gateway ho an'izao tontolo izao" amin'ny taona 2019 dia nanome fatratra ny mpankafy Karnavaly ho fankalazana fety mankamin'ny Greatest Show eto an-tany.
Amin'izao taona fahatelo izao, ity hetsika fanao isan-taona ity dia nampisondrotra ny fenitra ho an'ny hetsika premium any atsinanan'i Trinidad ary nanome fotoana ho an'ireo mpiaro azy hankalaza ny voninahitry ny Soca Kingdom amin'ny fomba milay.
Ny seranam-piaramanidina iraisampirenena taloha Piarco dia nanjary toerana hanaovana an'io fihoaram-pefy lafo vidy io ary nanome ny mpanatrika tsy fivadihan'ny fete ny fifangaroana kilasy, nahandro ary ny fankafizan'ny antoko Karaiba voalohany.
Ireo mpikarakara ny hetsika, ny FODAT LTD dia nahazo marika marobe tamin'ireo mpiaro ny famonoana olona fatratra, ny ambiansy haingon-trano ary ny fametrahana paika sy biraon'ny sakafo izay nanome an'i Gateway ho an'izao tontolo izao rivo-piainana mora nefa fety.
Ny valalabemandry any Gateway dia nahitana mpaka hetsika teny an-toerana ary na dia misy fatorana aza avy any ivelany izay nanidina tamin'ny faran'ny herinandro mba hiaina ny buzz voalohany namboarina tamin'ny andiany teo aloha.
Mifanaraka amin'ny lohahevitry ny 'Welcome Home', ny mpihaino marobe, mifangaro, mifangaro ary nankafy karazan-tsakafo marobe teo an-toerana izay nahitana Roast Chicken with Cassava Fries, Coo Coo, Dumplings, Calalloo, Hopkins Rice & Stewed Chicken with Salad , Roasted Pork, Roti miaraka amina hena karibonetra, Bake & Shark, Soup Corn, Doubles ary Pholouri.
Ireo sakafo matsiro ireo dia natolotra niaraka tamin'ny safidy zava-pisotro mahamamo sy tsy misy alikaola ary koa tsindrin-tsakafo mahavariana.
Ny hetsika dia nanatontosana mpilalao DJ malaza ary koa fampisehoana nivoitra avy amin'ny kintana Soca malaza eo an-toerana sy ny vanim-potoana toa an'i Kes The Band, Patrice Roberts, Teddyson John, Ravi B & Karma, Nadia Batson, Ricardo Drue, 5 Star Akil, Farmer Nappy, Shal Marshal ary ny A Team Band eo akaikin'ny feo manome aingam-panahy an'ny faritra malaza riddim.
Vehivavy vahiny iray izay nitsambikina tamin'ny sidina avy tao Tobago mba hanatrehana ny Gateway dia nizara hoe: “Sambany aho nanatrika an'ity fete ity ary tena talanjona aho. Nanolotra ahy ny namako akaiky indrindra izay tonga tamin'ny taon-dasa. Ny sakafo, ny fialamboly, ny fampiononana ary ny fiheverana amin'ny antsipirihany dia tena mahavariana… Tena sarobidy amin'ny volako! ”
Ireo mpanatrika mazoto an'i Fete dia nijanona maraina be maraina nankafy ny hetsika rehetra sy ny fampiasa amin'ity ultra-premium all-inclusive ity izay natao ho lohandohan'ny kalandrie Carnival fanao mandritra ny taona maro ho avy.
Ny hotely “Grand Dame” avaratra indrindra eto an-tany dia tokony hanomboka indray
Ny SeaWorld Entertainment, Inc. dia manendry ny Lehiben'ny Executive Executive